वाशिंगटन | जेपीएमए, इंक
Q: म एक WIC कार्ड कहिले प्राप्त गर्नेछु?
A: हामी यो पनि उत्साहित छौं! कृपया तपाईंको WIC कर्मचारीलाई सोध्नुहोस् जब WIC कार्डहरू तपाईंको स्थानीय WIC कार्यालयमा आउँदैछन्।
Q: म आफ्नो WIC खाद्य लाभहरू किन देख्न सक्दिन?
A: हामी WICShopper अनुप्रयोगको साथ तपाईंको WIC खाद्य लाभहरू लिंक गर्न काम गर्दैछौँ। तपाईंको सूचना सुरक्षित छ भनेर सुनिश्चित गर्न पहिला हामीले केहि गर्न आवश्यक कुराहरूहरू छन्। यो भविष्यमा हामी तपाईंको लागि उपलब्ध आशाको कुरा हुनेछ!
अनुमति - यो वस्तुहरूलाई वाशिंगटन WIC को लागि अनुमति दिइएको छ। खानाको लागि WIC लाई अनुमति छ भने यो जान्न उत्तम तरिका हो। एक कुरा जान्न हो कि तपाई वस्तु देख्न सक्नुहुनेछ, तर तपाईंको WIC खाद्य लाभहरूमा छैन, त्यसैले तपाईं यसलाई WIC सँग खरीद गर्न सक्नुहुन्न। WICShopper अनुप्रयोगमा WIC ले लिङ्क सम्म पुग्दछ, यो "अनुमति" सन्देश तपाईंको परिवारको फाइदाहरूमा लागू हुन सक्दैन। उदाहरणको लागि, एक वर्षको बच्चा सारा दूध हुन्छ। यदि तपाइँसँग तपाइँको परिवारमा एक वर्षको बच्चा छैन भने, सम्पूर्ण दूध तपाईंको WIC खाद्य लाभको भाग हुनेछैन, र तपाईं चेक स्ट्यान्डमा सम्पूर्ण दूध किन्न सक्नुहुन्न।
WIC वस्तु होइन - यसको मतलब यो वाशिंगटन WIC ले यो वस्तु स्वीकृत गरेको छैन। यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं यस खानालाई WIC खाद्य फायदाहरूसँग प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्दछ "मलाई यो खरीद गर्न सकेन!" [HC (3] यो अनुप्रयोगमा अवस्थित प्रयोग गरेर।
वाशिंगटन WIC स्वीकृत खाद्य सूची
JPMA, Inc. द्वारा बनाइएको प्रतिलिपि अधिकार 2012 - 2019 | सबै अधिकार सुरक्षित।